Ny gazety sinoa dia mankahala ny Galaxy Note 8 | Androidsis
Ny gazety sinoa dia mankahala ny Galaxy Note 8
Tonga tany Chine koa ny Samsung Galaxy Note 8 vao tsy ela akory izay, saingy tsy dia noraisina tsara araka ny tian'ny orinasa izany.
Ny orinasa Koreana Tatsimo dia manao ezaka lehibe hamerina ny fitokisan'ny Sinoa taorian'ny tsy fahombiazan'ny Galaxy Note 7 tamin'ny taon-dasa, saingy miatrika olana kely ny iraka ampanaovina azy noho ireo lahatsoratra ratsy maro be navoaka tamin'ny gazety momba ilay vaovao smartphone.
Araka ny tatitra nataon'ny Business Korea dia mamoaka lahatsoratra ratsy momba ny Note 8. isan'andro ny haino aman-jery sinoa. Mampitaha ny isan'ireo pre-order finday, 20.000 XNUMX eo ho eo, miaraka amin'ireo famandrihana 4 tapitrisa voarain'ny iPhone. Amin'izany rehetra izany dia tokony homarihina fa raha te hanana Galaxy Note 8, ny mpampiasa dia tsy maintsy mandoa $ 15 mialoha, raha maimaimpoana tanteraka ny famandrihana iPhone 8.
Midika izany fa ny rafitra apetraky ny famandrihana Samsung ho an'ny Note 8 dia manana vintana tsara kokoa hivadika ho fifanakalozana mahomby. Ny solontenan'ny orinasa iray aza dia manome toky fa efa misy ny famandrihana mialoha bebe kokoa ho an'ny Note 8 noho ny famandrihana voaray ho an'ny Note 7 amin'ny elanelam-potoana mitovy.
Etsy ankilany, ny vidin'ny terminal dia manalavitra ny olona te-hividy telefaona miaraka amin'ireo toetra ireo. Raha ampitahaina, ny Xiaomi Mi Mix 2, izay manana efijery tsy misy frame ary mitovy ihany ny fikirakirany amin'ny Galaxy Note 8 (manokana ny Snapdragon 835), $ 501 monja no vidiny, raha oharina amin'ny $ 1.061 ho an'ny phablet Koreana.
Singa iray hafa misy fiatraikany amin'ny orinasan'i Samsung any Shina ny fihetseham-po manohitra ny Korea Atsimo niseho niaraka tamin'ny fametrahana ny rafitra fiarovana THAAD. Nanomboka nanao ankivy ny marika toa an'i Samsung, LG ary Hyundai ny mpanjifa sinoa, ary miharihary izany na dia any amin'ny fanjakana sinoa isan-kerinandro aza.
Na izany na tsy izany, Samsung dia tsy manana anjaran-tsena lehibe any Shina, miaraka amin'ny 3% raha oharina amin'ny 87% izay ireharehan'ny Xiaomi, Oppo, Huawei ary Vivo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny gazety sinoa dia mankahala ny Galaxy Note 8
WT2 Translator, tetikasa tsy mampino amin'ny famoriam-bola